Showing posts with label မိမိအကြိုက်. Show all posts
Posted by yawcommunity at Friday, May 27, 2011 1 comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Monday, April 11, 2011 1 comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Friday, February 25, 20110comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Wednesday, February 23, 20110comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Sunday, January 30, 20110comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Wednesday, January 26, 20110comments Links to this post
စာရေးသူသည် ကမ္ဗောဒီးယားကျောင်း၌ ၂-နှစ်ကျော် နေလာခဲ့ရာ စားဝတ် နေရေး၊ ကိုယ့် ပညာ လေ့လာရေး စသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ် စိတ် ချမ်းသာမှု၊ ကျေနပ်မှု အြ့ပည့်အ၀ ရှိခဲ့သည်၊
ကမ္ဗောဒီးယားဆရာတော်နှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးသူ သတိထားမိသည့် ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ“ အင်း.. အင်း.. အင်း. ဟူသော အသံတစ်ခုဖြစ် သည်၊ ဆရာတော်သည် လူများစည်းကားသည့် ဘာသာရေးပွဲ လမ်းသဘင်ကျင်းပချိန် အတွင်းဝယ် အင်း.. အင်း.. အင်.. ဟူသော အသံကို အကြိမ်များစွာ ပြုလေ့ရှိ၏၊ စာရေးသူသည် ဆရာတော်၏ “အင်း”ဟူသောအသံကို ပထမက သတိမထားမိပေ။ လူတိုင်း၌ အလေ့အထတစ်ခု ရှိတတ်ရာ သာမန်အလေ့ အထတစ်ခုဟု ထင်မိသည်။
လွဲနေတာလေးတွေကို ပြောနေရင်း နောက်ထပ်အလွဲ တစ်ခုကို သွားသတိရမိပါတယ်။ ဘုန်ဘုန်းမြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တုန်းက ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ဒကာမတစ်ယောက် စကျင်ကျောက်နဲ့ ထုလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် တစ်ဆူယူလာပြီး ဘုန်းဘုန်းကျောင်းကို ရောက်လာပါတယ်။
ဒကာမက “အရှင်ဘုရား… ဒီဘုရားလေး အရှင်ဘုရားကျောင်းမှာ ထားချင်လို့ပါဘုရား..”တဲ့။ ဘုန်းဘုန်းက “ဒကာမ ဒီဆင်းတုတော် တော်တော်သပ္ပါယ်သားပဲ..၊ ဆိုင်က၀ယ်ယူပြီး ပူဇော်တာလား..၊ ဘာအတွက် လာလှူတာလဲ..” စသဖြင့် မေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒကာမက “ဆိုင်က၀ယ်လာတာ မဟုတ်ဘူးဘုရား…၊
Posted by yawcommunity at Sunday, February 28, 20100comments Links to this post
မိတ်ဆွေ……. သင်က သင့်ကိုယ်သင် ထင်တစ်လုံးဖြင့် တစ်ဘက်သားကို အဘက်မတန်သလို မတူမတန် ဆက်ဆံလာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “အညတရလို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ……. သင်က အသိုင်းအ၀ိုင်းအင်အား ဂုဏ်အင်အားကို အသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “အပယ်ခံသုညလို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ……. သင်က ဒေါသမာန်မာန အဆိပ်ပြည့်သော အတ္တအစွယ်ကို ထုတ်ပြသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “ ရေမြွေတစ်ကောင်လို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ….. သင်စိတ်ကောက်၍ စကားမဆိုသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းလို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ…… သင်က လက်တွဲဖြုပ်လျက် လမ်းခွဲထွက်သောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “သစ်ငုတ်တိုလို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ…… သင်က ဣဿာမျက်လုံးဖြင့် မလိုတမာ ကြည့်ရှုလာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် “မျက်မမြင် တစ်ယောက်လို” နေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ….. သင်က တစ်ဖက်သတ်တွေး၍ အထင်လွဲနေသည့်အခါ ကျွန်ုပ်သည် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်း တောင်ပန်၍ သင့်ကို ကျေနပ်စေပါ့မည်။
မိတ်ဆွေ….. သင်က စိတ်လိုလက်ရ စကားပြောလာသောအခါ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံလာသောအခါ ပြန်လည်လက်တွဲလာသောအခါတို့၌ ကျွန်ုပ်သည် ဒဏ်ရာမဲ့ နှလုံးသားဖြင့် ကြည်ဖြူစွာ လက်ခံကြိုဆိုပါမည်။
တကယ်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်သည် သင့်အတွက် သင်လိုရာ အသုံးပြုနိုင်သည့် “အဖြည့်ခံ နှလုံးသားပိုင်ရှင်” တစ်ဦးသာ ဖြစ်ပါသည်။
အရှင်ကောဝိဒ(ယော) ဘလော့မှ ကူးယူတင်ပြသည်။
Posted by yawcommunity at Wednesday, November 11, 20092comments Links to this post
Posted by yawcommunity at Sunday, July 05, 2009 1 comments Links to this post
(ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီး လန့် တော့မသွားကြပါနဲ့ နော်။)
ဘုန်းဘုန်း ဦးတိက္ခဉာဏရဲ့ တရားကို နာယူနေရင်းက ကျွန်တော်တရားတိပ်ခွေလေးတစ်ခုကို ချက်ချင်းသတိရလိုက်တယ်။ ဆရာတော်ဦးဇောတိက ၁၉၉၇ခုနှစ်လောက်က သြစတြေးလျမှာ ဟောထားတဲ့တရားလေးပါ။ "Giving & Loving" တဲ့။ ကျွန်တော် မကြာမကြာနာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် စိတ်ထဲမှာ ကိုယ့်အတ္တတွေနှင့် ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်မှုတွေ ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာပေါ့။
တရားထဲမှာ ဆရာတော်က လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို အဓိကပြောသွားပါတယ်။ Dr. Albert Schweitzer အကြောင်းပါ။ အာဖရိကကိုသွားပြီး ဘ၀ကိုမြှုပ်နှံပြီး လူသားအကျိုးပြုအလုပ်တွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ ကျွန်တော် သူ့ အကြောင်းကို နားထောင်မိတိုင်း အားကျကြည်ညိုစိတ်ဖြစ်ရပါတယ်။ သူ့ ဘ၀နှင့် သူ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို စာပေမှာရှာဖတ်တော့လည်း တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အတုယူဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ကြည်ညိုစရာကောင်းပါတယ်။
သူဟာ တခြားဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ။ တခါတလေ သူ့ လုပ်ငန်းအတွက် ပိုက်ဆံလိုရင် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ လိုက်တရားဟောပြီးတောင် ရံပုံငွေရှာတဲ့သူပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကတော့ ဗုဒ္ဓအလိုကျဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကလည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို လိုက်နာနေသူလိုပါဘဲ။ တခါက သူ့ အကြောင်းကို ဦးဇင်းလေးတစ်ပါးနှင့် ပြောဖြစ်တော့ သူက တကယ်လို့ သာ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဆိုရင် ဦးဇင်းတို့ က ဆုကြီးပန်လို့ တောင် ပြောချင်တာတဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဒီဆရာဝန်ကြီးဟာ တကယ်ကိုကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြီး အများအကျိုးကိုလုပ်သွားခဲ့သူပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ နာမည်ခံထားတဲ့ ကျွန်တော်တောင် သူ့ စိတ်ဓါတ်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မှီဖို့အချိန်တော်တော်ယူပြီး ကြိုးစားရအုံးမှာပါ။
ဆရာတော်ဦးဇောတိက က သူ့ ရဲ့ တရားကို ကဗျာတစ်ပုဒ်နှင့် အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ ကဗျာနာမည်က "Splendid Torch" တဲ့။ George Bernard Shaw ရဲ့ လက်ရာပါ။ အဲဒီကဗျာကို နားထောင်ရင်း၊ ဖတ်ကြည့်ရင်း အဲဒီကဗျာထဲမှာသုံးထားတဲ့ "Use Up" ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးက ကျွန်တော့်ကို စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီဘ၀ ကံအလျောက်ရလာတဲ့ ခန္ဓာကြီးကို ဘယ်လောက်ထိအသုံးချခဲ့ပြီးပြီလဲ။ ဘာတွေအတွက်အသုံးချခဲ့ပြီးပြီလဲ။ မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများကတော့ သူတို့ ရရှိလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မိမိအကျိုး၊ သူတစ်ပါးအကျိုးတွေအတွက် အကုန်အသုံးချပြီး ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်ရဲ့မီးစာရော၊ ဖယောင်းရော ကုန်တော့မှ မီးငြိမ်းသလိုမျိုး အသုံးချလို့ ရသမျှ အကုန်ထုတ်ပြီး သုံးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံး ခန္ဓာဝန်ချမယ့်အချိန်အထိ အများဝေနေယျတို့ ရဲ့ အကျိုးကို ရှေ့ ရှုဆောင်ရွက်တော်မူသွားခဲ့ကြပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား နှင့် အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ ရဲ့ တပည့်ဖြစ်ချင်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကရော ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ကျွန်တော်တို့ ဘ၀တွေကို ဘာတွေအတွက် အသုံးချခဲ့ပြီးပြီလဲဆိုတာ ပြန်သုံးသပ်စရာကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နောက်ပိုင်း မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကော ဘာတွေ ပြင်ဆင်ပေးပြီးပြီလဲ။ လက်ဆင့်ကမ်းပေးရမယ်ဆိုရင်ကော ဘာတွေကို ပေးခဲ့မှာလဲ။
ရိုသေလေးစားရပါသော ဘုန်းဘုန်းဦးတိက္ခဉာဏလင်္ကာရ နှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို အားကျိုးမာန်တက်လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများအားလုံးကို ဒီဆောင်းပါး၊ ဒီကဗျာလေးဖြင့် ရိုသေစွာဂါရ၀ပြုလိုက်ပါသည်။
(ကိုဝိမုတ္တိသုခ ပေးပို့လာတဲ့ အီးမေးလ်ကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည်၊ လူသားပီသတဲ့ နှလုံးသားတွေကို ဖော်ထုတ်ကြပါစို့ )
Posted by yawcommunity at Tuesday, May 19, 20090comments Links to this post
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် အပိုင်း ၂
(ဘီစီ ၄၆၉-၃၉၉) ခန့်တွင် ဆရာကြီး ဆိုကရေးတီးသည် သူ၏အမြင့်ဆုံး အတွေးအခေါ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သော "ကမ္ဘာကြီးသည် စက်လုံးကဲ့သို့ လုံးဝန်းသော သဏ္ဍာန်ရှိသည်" ဟူ၍ မိန့်ဆိုခဲ့သေးသည်၊ ထိုစဉ်က ဤအတွေးမျိုးကို လက်ခံသူ မရှိပါ ၊ ရှေးရိုးအစဉ်အလာ အယူအဆကို ဖီဆန်သူအဖြစ် သတ် မှတ်ခံခဲ့ရသည်၊ သေဒဏ်ကိုပင် စီရင်ခံခဲ့ရသည်၊ ထိုစဉ်က သူ၏ မိန့်ဆိုချက်ကား ယနေ့အဖို့ မှန်လွန်းလှသည၏။
ထို့ကြောင့် အဆင့်မြင့် ယနေ့စမ်းသပ်မှုများအရ ဆိုကရေးတီးကို ချီးကျူးဂုဏ်ယူ ဂါရ၀ပြုထိုက်ပါပေ၏၊ သို့သော် ဆရာ ကြီးဆိုကရေးတီးထက် နှစ်ပေါင်းကိုးဆယ်ခန့်စော၍ ဤကမ္ဘာကြီး သာမက စကြာဝဠာကြီးတစ်ခုလုံး ၀ိုင်းဝန်းသော သဏ္ဍာန်ရှိသည် ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည့် မဟာလူသားကြီး ရှိခဲ့ပါသည်၊ သူကား သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ပိုင်ရှင်အစစ် မြတ်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်ပါ သည် ဟု paul ၏ ဆောင်းပါးထဲ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်၊ ထို့ကြောင့် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကိုကား မည်သူတစ် ဦးတစ်ယောက်မျှ တုနှိုင်းမမီနိုင်သော ဥာဏ်တော်ဟု ပြောလျှင် မှားအံ့မည်မထင်ပါ။
၁၉၅၄ ခုနှစ်လောက်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော Spectrum Physics တွင် ရောင်စဉ်များကို သရုပ်ခွဲကြည့်ရာ မျက်လုံးသည် အရောင်များကို မြင်ရာ၌ တစ်ခုပြီးတစ်ခု (တစ် ရောင်ပြီးမှ တစ်ရောင်)မြင်ရသည်ဟူ၍ တွက်ချက်နည်းဖြင့်၎င်း၊ spectrometer ခေါ် ကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လက်တွေ့နည်းဖြင့် ၄င်း၊ သက်သေပြခဲ့ကြသည်။
ရှင်းလင်းချက်မှာ မတူညီသော လှိုင်းအလျားတို့၏ ရွေ့ လျားမှုသည် မြန်ဆန်လွန်းသောကြောင့် မတူညီသော
အရောင်မျိုးစုံ (နီ၊၀ါ၊ပြာ၊ခရမ်း)စသည်တို့ကို တစ်ပြိုင်နက် မြင်ရ သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်၊ အမှန်ကား မတူညီသော အရာများ ကို အစဉ်အတိုင်းမြင်ရသည်၊ု မြတ်စွာဘုရားက စိတ်ဟူသည် (ဤနေရာ၌ မြင်သိစိတ်) တစ်ချိန်တည်းတွင် နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက် မဖြစ်ကောင်း ဟူ၍ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ တုနှိုင်းမမီသော ဥာဏ်တော်ဖြင့် အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်၌ တိကျစွာ ဟောတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသည်တို့ကား လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ကာလက တကယ်ရှိခဲ့သည့် စွမ်းအားထက်မြက်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့် ယနေ့ခေတ်မီပါသည်ဆိုသော အင်တာနက် သည် ခေတ်ဟောင်းဆီက မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် ထက် ဘာကြောင့်များ ဤမျှလောက်ကွာခြားပြီး အဆင့်နိမ့်နေရ ပါသနည်း။
ရှင်းပါဦးအံ့….ယနေ့ခေတ် အင်တာနက် ပေါ်ပေါက် လာရန်အတွက် ပေးဆပ်ရသည့် အရင်းအနှီးကား…လူသားတို့၏ ဦးနှောက်ဖြင့် တီထွင်ပြီး ငွေကြေးပမာဏနှင့် အချိန်ကာလအား ဖြင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အရင်းအနှီးလောက်သာ ပေးဆပ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကား သူ၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ကို ရရှိရန် အတွက် အလောင်းတော်ဘ၀ လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ကာလတိုင်အောင် လူတကာတို့ ပြုနိုင်ခဲသော ပါရမီတော်(၁၀) ပါးကို ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရသည်၊ ထိုသို့ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရာတွင် သမုဒ္ဒရာရေ မည်မျှပင် များပြားစေကာမူ မြတ်ဗုဒ္ဓအလောင်းတော် လှူဒါန်း တော်မူခဲ့သော အသွေးတော်၏ ပမာဏကိုကား မမီနိုင်ပါ။
မိုးကောင်းကင်က ကြယ်တာရာများ မည်မျှပင် များပြား စေကာမူ လှူဒါန်းတော်မူခဲ့သော မျက်လုံးတော်၏ အရေအတွက်ကိုကား မမီနိုင်ပါ။
မြင်းမိုရ်တောင်ကြီးသည် ယူဇနာ ရှစ်သောင်းလေး ထောင် မြင့်မားစေကာမူ လှူဒါန်းတောမူခဲ့သော ဦးခေါင်းတော် များ စုပုံထားသည့် ထုထည်ကိုကား မမီနိုင်ပါ။
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် မည်မျှပင် ထုထည်ကြီးမားစေကာ မူ လှူဒါန်းတော်မူခဲ့သော အသားတော်၏ အရေအတွက်ကိုကား မမီနိုင်ပါချေ။
ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်တွင် ၀က်ဘ်ဆိုက် ဒေတာ (website – Data)များ ဘီလျံပေါင်းများစွာမက ရှိပါသော်လည်း ဆန်းကြယ်နက်နဲမှု အရာမှာမူကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ် ဆိုက်တွင် လွတ်တင်ထားသည့် သုတ်၊ ၀ိနည်း၊ အဘိဓမ္မာ တည်း ဟူသော ပိဋကတ်သုံးပုံကိုကား မမီနိုင်ပါချေ။
ဤကဲ့သို့ တုနှိုင်းမမီ ကွာခြားလွန်းမက ကွာခြားလွန်း လှသည့်အကြောင်းမှာ ပြဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း အသက်၊သွေး၊ချွေး၊ များစွာဖြင့် ပေးဆပ်ရင်းနှီးခဲ့ရသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီတော် အရင်း အနှီး ကြီးမားမှုကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ….လောကလူအများ အသုံးပြုနေကြ သော အင်တာနက်၏ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ဘ၀တွင် အဓိကမကျ သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထွန်းကားတိုးတက်မှုမျှသာ စွမ်းဆောင်နိုင် မှာ ဖြစ်ပြီး၊ မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ဥာဏ်တော်အား အသုံးချကာ ဟောကြားတော်မူထားသော ဓမ္မများသည် လူ၊နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့အတွက် ဘ၀တွင် အဓိကကျသည့် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်
မည်သည့်အရာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ တုနှိုင်းစေကာမူ တုနှိုင်း၍ မမီနိုင် ပါချေ။
ဤကဲ့သို့ နှိုင်းယှဉ်ရေးသားရခြင်းသည် ယနေ့ အိုင်တီ ခေတ်ကြီးတွင် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံတို့ဖြင့် အွန်လိုင်းပေါ်တက် နေကြသော ခေတ်လူငယ်များအကြားဝယ် သူတို့နားလည်နိင် သည့် စကားလုံးများဖြင့် တန်ဆာဆင်ပြီး မြတ်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော် များကို စိတ်ဝင်စားကာ ဘ၀တန်ဖိုး တိုးတက်မှုများစွာ ရရှိကြစေ ရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုကဲ့သို့ Internet & Enlightenment of Buddha မြတ်ဗုဒ္ဓဥာဏ်တော်နှင့် အင်တာနက်အကြောင်းကို ရေး သားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်….. မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ပါရမီတော်အဟုန် ဂုဏ်တော်အစုံ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ဂုဏ်တို့ကို အာရုံပြု၍ ဗုဒ္ဓါနုဿတိ ဘာဝနာများ ကြိုးစားပွားများနိုင်ကြစေရန် ရည်ရွယ် လျှက် မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ၏ လင်္ကာလေးကို ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတော့သတည်း။
၁။ သိရန်မှန်က မကျန်ရအောင်၊ လုံးဝစုံလင် အကုန် မြင်၊ သဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော အစွမ်းတည်း။
၂။ သိသည့်တရား၊ များအပြား၌ ၊ ဟောထားစဖွယ်၊ နည်းသွယ်သွယ်ကို ခြယ်လှယ်စုံလင်၊အကုန်မြင် သဗ္ဗဉ်ဥာဏ် တော် အစွမ်းတည်း။
၃။ ကျွတ်ထိုက်ကြပေ၊ များဝေနေ၏ ဣနြေ္ဒစရိုက်၊ သူ့ အကြိုက်ကို၊ နှိုက်ချွတ်စုံလင်၊ အကုန်မြင် သဗ္ဗဉ်ဥာဏ်တော် အစွမ်းတည်း။
ဥာဏ်တော်စွမ်းပကား ဤသုံးပါးကြောင့်၊ အများဝေနေ
ကျွတ်လွတ်စေဖို့၊ မနေမနား၊ သက်တော်အားဖြင့် ကြီးမာလေဘိ၊ ရှစ်ဆယ်ပြည့်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်၊ စံသည့်တိုင်အောင်၊ သယ်ယူဆောင်၊ ဘုန်းခေါင်ငါတို့ဘုရားတည်း။ ။
Posted by yawcommunity at Saturday, September 27, 20080comments Links to this post
ယနေ့ကမ္ဘာကြီး၌ အိုင်တီနည်းပညာသည် လျှင်မြန် သောအဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လျှက်ရှိရာ International Network (Internet)ဆိုသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ရက် ချိတ်ဆက်မှု ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို ရွာလေးတစ်ရွာလား ထင်မှတ်ရ လောက်အောင် ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းမှ အနောက်ခြမ်းသို့ E-mail ဖြင့် သော်၎င်း၊ G-talk, VZO chat, yahoo massanger, Skype စ သည်တို့ဖြင့် ချက်ချင်းပင် webcam နှင့်ရုပ်မြင်၍ဖြစ်စေ၊ စာရိုက်၍ဖြစ်စေ၊အသံဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ ရနေပြီဖြစ်ပါ သည်၊ ထို့ကြောင့် ရှေးယခင်က ကမ္ဘာကြီးသည် အလွန်ကျယ် ၀န်းသည်ဟု ဆိုရသော်ငြားလည်း ယနေ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးတွင် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသွားလေပြီ ဟု ဆိုရပါမည်။
တစ်ခါက ပြည်ပ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးသည် (Internet connection)ရက်ပိုင်းလောက် ပြတ်တောက်သွားရာ သူ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နိုင်ငံတကာနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ရသည့်အတွက်(internet)မရှိလျှင် သူ့တွင် အလွန်နစ်နာကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါသည်၊ ဤသည်ကို ထောက် ရှုခြင်းဖြင့် ယနေ့ခေတ်၌ လူသားများအတွက် အင်တာနက်သည် အလွန်အရေးပါ အရာရောက်သည့်အပြင် မရှိမဖြစ် အလွန်လို အပ်သော အရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း သက်သေခံနေပေသည်။
အကယ်၍ လူသားတို့အတွက် အင်တာနက်သည် မရှိ မဖြစ် လိုအပ်နေသော အရာတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုလျှင် လွန်ခဲ့သော ထောင်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်တုန်းကလည်း အင်တာနက် လိုအပ်လိမ့် မည်ဟု တွေးတောစရာပင်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာ …ထိုခေတ်တုန်းက အင်တာနက် မ ပေါ်ပေါက်သေးချေ၊ သို့သော်လည်း အင်တာနက်ထက် အဆ ပေါင်းများစွာ စွမ်းရည်မြှင့်မားပြီး လောက၌ မည်သည့်အရာနှင့်မျှ တုနှိုင်းမမီသော အရာတစ်ခုကား အမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေ သည်၊ ထိုအရာကား တစ်ခြားမဟုတ်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်ကြီးပင် ဖြစ်ပါသည်၊
ယနေ့ခေတ် အင်တာနက်၏ ဆက်သွယ်နိုင်သော ဧရိယာမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလောက်မျှသာ ဖြစ် ပါသည်၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ သဗ္ဗညုတ ရွှေဥာဏ်တော်သည် ဤကမ္ဘာမျှ သာမက စကြာဝဠာ ကမ္ဘာပေါင်းများစွာသို့လည်း ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။
အင်တာနက်တွင် မိမိအသုံးပြုခဲ့သည့် ၀က်ဘ်ဆိုက် (website)များသို့ ခြေရာခံကာ မိမိ၏ information များကို ခိုးယူ နိုင်ပါသော်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် သူ၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် ဟု ဆိုအပ်သည့် သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ဖြင့် အလိုတော်ရှိသလို ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ကာ အသုံးပြုနေစဉ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ (information)များကို မည်သူမျှ ခြေရာခံ ခိုးယူနိုင်စွမ်း မရှိသည့် အပြင် လုံခြုံမှု(security)အပြည့်ရှိနေပေသည်။
ယခုဖြစ်ဆဲကာလတွင်လည်း လူ့ပြည်သာမက နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မပြည်တိုင်အောင် သိမြင်နိုင်သကဲ့သို့ ငရဲ၊တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာစသည့် အပါယ်ဘုံသားများ၏ ဘ၀ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုလည်း အလိုရှိလျှင် အလိုရှိသလောက် တည်ကျ စွာ သိမြင်နိုင်စွမ်း ရှိပါသေးသည်၊ လွန်ခဲ့သော အတိတ်ကာဆီက မရေမတွက်နိုင်သော လူနတ်ဗြဟ္မာ ဘ၀များစွာတို့၏ ဖြစ်ရပ်မှန်များကိ အလိုရှိလျှင် အလိုရှိသလောက် တီဗွီဖန်သား ပြင်တွင်သိရသကဲ့သို့ တိကျမှန်ကန်သော အဖြေ များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်၊ ထိုအရာကား "ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ ဥာဏ်" ဟု ဆိုရသည့် အစွမ်းထက်သော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ပင်တည်း။
ထိုမျှမက နောင်ဖြစ်လတံ့သော အဖြစ်အပျက်များကို လည်း လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သကဲ့သို့ တိကျမှန်ကန်စွာ သိနိုင်ပါ သည်၊ ထိုအရာကား မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ " အနာဂတံသဥာဏ်တော်"ပင် ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူသားတို့၏ စီးပွား ရေး၊အိမ်ထောင်ရေး၊ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ပညာရေး စသည့် လောကရေးရာများစွာကို တိုးတက်သာလွန်အောင် စွမ်းဆောင် နိုင်ကာ ဘ၀ပြဿနာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရုံ သာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်၊ ရာနှုန်းပြည့်ကား မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပေ။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည်ကား သူ၏ သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်ကို အသုံးပြုကာ လူသားများ၏ ဘ၀ကိုသာမက နတ်၊ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့၏ ဘ၀တိုးတက်အောင်မြင်မှုကိုပါ ရာနှုန်းပြည့်ရရှိစေ ရန် လမ်းညွန်မှုပေးနိုင်ပါသည်၊ ထို့ပြင် နတ်ဗြဟ္မာသတ္တ၀ါတို့၏ တကယ့်ဘေး တကယ့်အရေးဖြစ်သည့် အိုဘေး၊နာဘေး၊သေ ဘေးစသည့် ဘေးဆိုးကြီးများမှလည်း လွတ်မြောက်စေရန် သူ၏ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို အသုံးချကာ လမ်းညွန်မှု အပြည့်အ၀ ပေးနိုင်ပေသည်၊ ထို့ကြောင့်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါအားလုံး၏ အားကိုးရာ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်ခဲ့သည် မဟုတ် ပါလော။
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ပို့စ်ကို ပေးပို့သည့် ညီမငယ် အေးစုမွန်အား ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည်။
Posted by yawcommunity at Thursday, September 25, 20080comments Links to this post
Double – think. Double-talk Double- standard
ဒီနေ့ဆရာဖေမြင့်ရေးတဲ့ စာဖတ်သမားများ၏ မှတ်စုများ စာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့တယ်။ တွေးစရာ စိတ်ဝင်စား စရာတွေ အများကြီးပါ ။အဲဒီထဲက သဘောအကျဆုံး အာတီကယ်လေး တခုကို မျှဝေခံစားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က လောကကြီးကို အဖြူ အမည်း နှစ်မျိုးတည်းပဲ မြင်သည်၊ ဖြူသည် မည်းသည်၊ မှန်သည် မှားသည်၊ တရားသည် မတရားသည်၊ တွေ့အကြုံနည်းတော့ ကျနော်တို့သိတာတွေလည်းနည်းသည်။ သို့သော် သိသမျှသည် ရိုးရိုး စင်းစင်း ရှင်းရှင်း ကလေး။
နောက်တော့ တဖြေးဖြေး ပိုသိလာသည်၊ ပိုရှုပ်ထွေးတာတွေမြင်လာသည်၊ ဖြူတိုတို ညိုတိုတို မည်းတည်းတည်း စသဖြင့်၊ မသိချင်၍လဲ မရ ဩ၀ါဒတွေ မကြာခဏ ကြားနေရသည်၊
ဟေ့ကောင်- အားလုံးတသမတ် တည်းမတွေးနဲ့။ ခြွင်းချင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အလိုက်သင့် အလျားသင့်ဆိုတာ ရှိတယ်။ တစ်ဦးချင်း တစ်ခုချင်းရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အနေအထားတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ စဉ်းစားပေးရတာတွေရှိတယ် ။လောကကြီးမှာ နေရာတကာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း တိတိကျကျ ဖြတ်လို့မရဘူး။ လောကသဘာဝဟာ အပိုင်းပိုင်း အပြတ်ပြတ် မဟုတ်ဘူး။ အကန့်လိုက် အကန်လိုက် မနေဘူး ။ တိကျတဲ့နယ်နိမိတ်စည်းမရှိဘူး တဆက်တည်းစီးဆင်းရင်းက ပြောင်းလဲသွားတာမျိုး။ ရောင်ပြေးအထည်လို ဒီဘက်ကပြာပေမယ့် ဟိုဘက်ကစိမ်းတယ်။ ပြာလိုက် စိမ်းလိုက် ယ စနမ်းလိုက်ပြာလိုက်. အဲဒီတော့ တခုတည်း မူသေမှတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက် ။မအနဲ့ ၊မတုံးနဲ့ ၊ မကြောင်နဲ့ ၊နားလည်မှုရှိပါစေ ဟိုဘက် သည်ဘက်မြင်တတ်ပါစေ ။ မယုတ်မလွန်ပြောတတ်ပါစေ။လူရည်လည်ပါစေ။
သည်လိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်းကျနော်တို့ နုရာမှ ရင့် လာကြသည်။ စကားကို ဟိုမရောက်သည် မရောက်ပြောတတ်လာသည်၊ ယုံတာ မယုံတာ အပထား ရောရောင်ဖြီးဖြန်းလုပ်တတ်လာသည်. အမှတ်တမဲ့ အဖို့တော့ ဟုတ်သလိုလို။ ခုမှဘဲ တတ်လာသလိုလို။လိမ္မာလာသလိုလို၊ သို့သော် အဲသည် လိုလို တွေနှင့် အနေကြာသည့်အခါ ကျနော်တို့ ခေါင်းထဲမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို ဖြူသလား မည်းသလား မကွဲပြားတော့။ မှားသည် မှန်သည် မခွဲခြားနိုင်တော့။ တရားသလား မတရားသလား စဉ်းစားရကောင်းမှန်းမသိတော့။
နှစ်ခွတွေး နှစ်မျိုးပြော နှစ်ပုံရပ်ကာ ကျင်လည်လာရင်း တဖြည်းဖြည်း ငယ်စဉ်က ရှိခဲ့သည့် ရိုးစင်းဖြောင့်မှန်သော အသိဥာဏ်တွေ ကွယ်ပျောက်ကာ အရာရာ ၀ိုးတိုးဝါးတားနှင့် သုညသမား ဖြစ်တော့မည်။
( Double-think- ဆန့်ကျင်ဘက် အယူအဆနှစ်မျိုးကို တစ်ပြိုင်တည်း လက်ခံခြင်း။
့ Double-talk - ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် မရေမရာ ပြောဆိုခြင်း။
Double- standard -စံနှစ်မျိုးထားခြင်း ၊ လိုသူကိုတစ်မျိုး မလိုသူကို တစ်မျိုး ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
(သည်အတွက် ဖြေဆေးက အသိဥာဏ် Intelligence နဲ့ စိတ်ဓာတ်သတ္တိ Moral courage ။ အဲသည် နှစ်ခု ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာ ပညာရှာဖွေမှု Education ။ )
Posted by yawcommunity at Thursday, September 11, 20080comments Links to this post
ဟိုဒီ လျောက်ကြည့်ရင်း ဒီလို စိတ်ဝင်စား စရာလေးတခု တွေ့လိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD နဲ့ 1234 တွဲပြီး အသိပညာ၊ ကြိုးစားမှုနဲ့ စိတ်နေသဘောထား ဘယ်အရာက ပိုအရေးပါလဲဆိုတဲ့ တွက်နည်းလေးပါ။ ပထမဦးဆုံး A ကနေ Z အထိကို 1,2 လို့ နံပါတ်တပ်ပြီး စီလိုက်တယ်။
အသိပညာဆိုတဲ့ (Knowledge) ကို သူ့ဂဏန်းစဉ်အတိုင်း ပေါင်းကြည့်ရင်
(11+14+15+23+12+5+4+7+5=96) ၉၆ မှတ်ရပါတယ်။
ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ (Hardwork) ကို ပေါင်းကြည့်ရင် ၉၈ မှတ်ရပါတယ်။
နောက် စိတ်နေသဘောထား (Attitude) ကို ပေါင်းကြည့်ရင် ၁၀၀မှတ်
ဒါလေးဖတ်ပြီး ပုဇွန်ဦးနှောက်ကို တချက်ညစ်လိုက်တော့ ဒီလိုလေးထွက်လာတယ်။ လူတယောက်ဟာ ပညာအဆင့်အတန်း မြင့်တာ၊ ဥစ္စာပစ္စည်း ကြွယ်ဝတာထက် စိတ်သဘောထား ပြည့်ဝဖို့က ပိုအရေးကြီးကြောင်းပါ။
Posted by yawcommunity at Thursday, September 04, 20080comments Links to this post
နိုင်းနိုင်းစနေ ရေးတဲ့စာတွေကို အမြဲဖတ်ဖြစ်တယ်၊ သူရဲ့စာတွေက ဘ၀ခွန်အားတွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်မှုတွေ ပေးလွန်းလို့ သဘောကျခဲ့တယ်၊ခုလည်းသူရဲ့ ပို့စ်လေးကို သဘောကျလို့ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခါက ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင် “ခွေးရောင်းရန် ရှိသည်” ဟုသော ဆိုင်းပုဒ်တစ်ခုကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ကလေးငယ် တစ်ဦးက ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်ပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်အား မေးလေသည်။
“ခွေးတစ်ကောင် ဘယ်လောက်လဲ ခင်ဗျာ”
“တစ်ကောင်ကို ဒေါ်လာ ၅၀ ကနေ စရောင်းပါတယ်”
ကောင်လေးမှာ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲ လက်နိုက်ပြီး...“ကျွန်တော်မှာ ၃၇ဒေါ်လာပဲ ရှိတယ်... ခွေးတွေကို ကျွန်တော် ကြည့်လို့ရမလား” ဟု ခွင့်တောင်းလေသည်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ရီပြီး လေတစ်ချက် ချွန်လိုက်သည်နှင့် ခွေးမကြီးတစ်ကောင်က ခွေးကလေး ငါးကောင်ကို ဦးဆောင်ပြီး ထွက်လာသည်။ ခွေးငယ်လေးများအနက် တစ်ကောင်မှာ နောက်ကောက် ကျန်နေခဲ့သည်။ ကလေးငယ်မှာ ထိုနောက်ကောက်ကျန်နေသော ခွေးကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဆိုင်ပိုင်ရှင်အား “ အဲဒီခွေးက ဘာဖြစ်တာလဲ” ဟုမေးလိုက်သည်။
ပိုင်ရှင်က “ဒီတစ်ကောင်က မွေးကတည်းက မသန်ဘူး။ တင်ပါးဆုံ မဖွံ့ဖြိုးဘူးလို့ ဆရာဝန် ကပြောတယ်။ တစ်သက်လုံး ဒီလိုပဲ ဖြစ်သွားတော့မှာတဲ့”
“ဒီတစ်ကောင်ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ရောင်းမလဲ” ကလေးငယ်မှာ ၀မ်းသာအားရ မေးလိုက်သည်။
“ဒီမသန်တဲ့ တစ်ကောင်ဆိုရင် မရောင်းဘူး... လိုချင်ရင် အလကားပေးလိုက်မယ်”
ကလေးငယ်မှာ စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ပိုင်ရှင်၏မျက်နှာကို ကြည့်ပြီး....
“ကျွန်တော် အလကားမယူချင်ဘူး...တစ်ခြားခွေးတွေလိုပဲ သူလည်း သူ့တန်ဖိုးနဲ့ သူရှိမှာပါ။ ၃၇ ဒေါ်လာကို ကျွန်တော် အရင်ပေးခဲ့မယ်။ တစ်လကို 50cent ဆီ ကျေတဲ့အထိ ကျွန်တော်လာဆပ်မယ်”
“ဒီခွေးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်စရာ မလိုဘူး လူလေး...ဒီကောင်က တစ်ခြား အကောင်တွေလို မပြေးတတ်ဘူး.. မဆော့တတ်ဘူး”
ကလေးငယ်မှာ ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ခါးကိုညွှတ်ပြီး ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို လှန်ပြလိုက်သည်။ ခြေထောက်မှာ တွန့်လိမ်နေပြီး သံချောင်းဖြင့် တောင့်ခံထားသည်။ ကလေးငယ်မှာ ပိုင်ရှင်ဖက်လှည့်ပြီး
“ကျွန်တော်လည်း သာမန်ကလေးတွေလို မပြေးနိုင်ဘူး၊ မလှုပ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီခွေးလေးဟာ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရမဲ့ လူလိုကြောင်းကို ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်”
“ဒီခွေးကလေးတွေ အားလုံး လူလေးလို ပိုင်ရှင်မျိုးနဲ့ ကြုံရပါစေလို့ ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ်”
လှပတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က အရာဝတ္ထုတွေကို ခံစားတတ်မယ်။
စစ်မှန်ဖြူစင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လူတိုင်းကို ဆက်ဆံတတ်မယ်။
မ၀င့်ဝါတဲ့ စိတ်နဲ့ ကိုယ့်အမှားကို စစ်ဆေးတတ်မယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့ စိတ်နဲ့ သူတစ်ပါးကို အပျော်တွေ မျှဝေတတ်မယ်။
တက်ကြွတဲ့ စိတ်နဲ့ အကူအညီလိုတဲ့ လူတွေကို ကူညီတတ်မယ်။
တကယ်တော့ ငါဟာဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်စားပြုတွေက ဘ၀မှာ သိပ်အရေးမပါ ပါဘူး။ အရေးပါတာက ဘယ်သူငါ့ကို ယုံကြည်သလဲ? ဘယ်သူ ငါ့ကို ချစ်ခင်သလဲ? တန်ဖိုးထားသလဲ? ပေါင်းသင်းသလဲ? ဆိုတာပါပဲ။ တကယ့်သူငယ်ချင်း အစစ်အမှန်ဆိုတာ လူတွေအားလုံး ကိုယ့်ကိုဝိုင်းပယ်ပြီး ထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘေးမှာ ကျန်နေခဲ့မယ့် သူပဲဖြစ်တယ်။
Posted by yawcommunity at Monday, August 25, 20080comments Links to this post
ကံနှင့်ပတ်သက်၍စားအုပ်အမျိုးရေးသားဖော်ပြသည်ကိုဖတ်ဘူးပါသည်။ ကံဆိုသည်ကလည်း စာပေဗဟုသုတ မကြွယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် သိပ်ရှုပ်ထွေးသော အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ သို့ အတွက်ကြောင့်လည်း မကြံစီ အပ်သော အရာလေးမျိုးတွင် ကံကိုတစ်ခုအပါဝင် ဟောကြား တော်မူခဲ့ပေသည်။ အမှန်ပင်လေ့လာကြည့်လျှင် ကံဆိုသည်မှာ လူသားတိုင်းအတွက် နေ့ စဉ် လုပ်ရှားမှုမှ တစ်ဆင့် ဆည်းပူးစုဆောင်းနေသော အရာတစ်ခု ပင်ဖြစ် နေပေသည်။
မိမိငယ်စဉ်က ကျေးဇူးရှင် တောင်မြို့ မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် ရေးသားဖေါ်ပြထားသောကံဆိုတာ ဘယ် လဲဆိုသည့် အကြောင်းရာကို သွားသတိရမိသည်။ တကယ်ပင်ပြည့်စုံကာ ဖတ်သူများနား လည်းစေ သည့် အရေးသားဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ဘလော့မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ရင်း ကံအကြောင်းသိ လိုသူများ ဗဟုသုတရပါစေ ဟုရည်ရွယ်ကာ ဖေါ်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဓမ္မပဒတရားတော်နှစ်ပုဒ်ဝယ် ဒုက္ခသည်လည်ကောင်း၊ သုခသည်လည်ကောင်း၊ လိုက်ပါနေသည်ဟု ဟော်တော် မူရာ၌ ဒုက္ခပေးမည့်အကုသိုလ်ကံလိုက်ပါနေသည်ကို ဒုက္ခလိုက်နေသည်ဟုလည်ကောင်း၊ သုခပေးမည့် ကုသိုလ်ကံလိုက်ပါနေသည်ကို သုခလိုက် နေသည်ဟုလည်းကောင်း ဟောတော်မူလိုသည်။ ထိုသို့ ဟောတော်မူ လိုလျှင် ကံဆိုသော တရားသည် အဘယ်တရားနည်းဟု မေးဘွယ်ရှိ၏။ အဖြေကား- ကံဟူသည် ကုသိုလ် အကုသိုလ်စိတ်၌ ယှဉ်လျက်ပါသော စေတနာစေတသိက်တည်း။
စိတ်ကခေါင်းဆောင်၍ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြုသော်လည်း တကယ်အလုပ်-လုပ်သောတရား သည်စေတသိက် အများတွင် စေတနာစေတသိက်တည်း။ ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုသမျှ၌စေတနာညံ့လျှင်ထိုအမှုလည်းသေငယ်၏။ စေတနာထက်သန်လျှင် ထိုအမှုလည်းကြီးကျယ်၏။ စေတနာသည် မိမိတာဝန်ကိုလည်ဆောင်၏။အခြားတရား တို့ ကိုလည်းဆိုင်ရာတာဝန် ဆောင်ဘို့ ရန်လှုံ့ ဆော်၏။ ဤသို့ လျှင် အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ရာ၌စေတနာ၏သတ္တိ သည် အားကြီးရကား ထိုစေတနာကိုပင် ကံ-အလုပ်ရှင်၊ အမှုသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုရသည်။ စေတနာဟံ ဘိက္ခစေ ကမ္မံ ၀ဒါမိ- ရဟန်းတို့ စေတနာကို ကံ-ဟုငါဘုရားမိန့် တော်မူသည်။
ကံသည် ကုသိုလ် အကုသိုလ်စေတနာ, စေတနာသည် စေတသိက်ဖြစ်လျှင် အခြားနာမ်တရား တို့ကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီးလျှင် ချုပ်သွားသည် မဟုတ်လော၊ အဘယ်သို့ လိုက်ပါနေသနည်းဟု မေးဘွယ်ရှိ ၏။ အဖြေကား-ကံဟုခေါ်ဝေါ်အပ် သော စေတနာသည် ဖြစ်ပြီးလျှင် ချက်ခြင်းချုပ်သော်လည်း ကံ၏သတ္တိကားကျန်ရစ်၏။ထိုကျန်ရစ်သောသတ္တိ သည် အကျိုးပေးဘို့ ရန် အစွမ်းမကုန်သေး သမျှ အမြဲလိုက်ပါ၍နေသည်။
ထင်ရှားစေအံ့- လူတစ်ယောက်သည် ကလေးဘ၀၌သူငယ်တန်း မှစ၍ ပညာသင်၏။ ထိုသူငယ်သည် အတန်းအဆင့်ဆင့်တက်၍ နောက်ဆုံးအတန်း ထိအောင် သင်၏။ ထိုသူငယ်၏ ရှေးရှေးအတန်း၌ သင်ခဲ့သောစာတွေသည် တချို့ မှာသူ့ ကိုယ်တိုင် သတိ မရ သော်လည်း သင်ယူအပ်ပြီးသောပညာ၏ အသိဥာဏ်သတ္တိကား သူ၏ သန္တာန်၌ လိုက်ပါနေ သည်သာ။ ထို့ ကြောင့် တတန်းထက်တတန်းတက်ရာ၌ အသိဥာဏ်လည်း အဆင့်ဆင့်ကြီး ထွားလျက်လာလေသည်။ ထို့ အတူကံတရားသည် ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားသော်လည်း ထိုကံ၏ သတ္တိ ကား ကံပြုသူ၏သန္တာန်၌ ကျန်ရှိရစ်သည်သာ။ ထို့ ကြောင့်အကြောင်းညီညွတ်သောအခါ ထိုသူ၏ ကံသည် ထိုသူ၏ သန္တာန်မှာ အကျိုးကို ဖြစ်စေရသည်။
လူတစ်ယောက်အား ငယ်စဉ်ကကျန်းမာရေးဆေးအစာတို့ ကို လူကြီးများကဂရုစိုက်၍ကျွေး၏။ထိုဆေးထိုအစာ တို့ သည် စားပြီး၍ ရက်အနည်းငယ်ကြာလျှင် ၀မ်းထည်း၌ ကုန်သွားသော် လည်း ထိုဆေးထိုအစာ၏ကျန်းမာစေ နိုင်သော သတ္တိမှာ ထိုသူ၏သန္တာန်၌ ကျန်ရှိရစ်၏။ ထို့ကြောင့်ထိုသူသည် နောင်အခါ၌ ကျန်းမာသူဖြစ်ရ၏။ ငယ်ရွယ်စဉ်က အပျော်အပါးလိုက်စားသူ သေရည်အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်စားသူလည်းထိုပျော်ပါး သောက်စားမှုတို့ ၏မကောင်း သတ္တိသည် ကျန်ရှိရစ်သောကြောင့် နောင်အခါမကျန်းမာသူဖြစ်ရ၏။ ထို့ အတူကံ တရားတို့သည်လည်း သတ္တိမကုန်သမျှ ထိုသူအား ကုသိုလ်ကံသည် ကောင်းကျိုးပေး၍ အကုသိုလ်ကံ သည် ကောင်းကျိုးပေး၍ အကုသိုလ်ကံကလည်း မကောင်းကျိုးပေးလေတော့သည်။
Posted by yawcommunity at Tuesday, August 12, 20080comments Links to this post
အရေးမကြီးတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တချို့ကို မရမက ရအောင် မလုပ်ပါနဲ့။
သူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို အချိန်ပေးပါ။ မဖြစ်လောက်တဲ့ ကိစ္စလေးကို
မရမကလုပ်ရင်းနဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ရရင် အချိန်ကုန်လူပန်းပြီး
တစ်ခြားပိုပြီးအကျိုးရှိ တဲ့အလုပ် ပျက်တာပဲအဖတ်တင်မယ်။
တစ်ထောင်ဖိုးရအောင်လုပ်ရင်း အချိန်ကုန်မယ့်အစား တစ်သိန်းဖိုးရ
အောင်လုပ်ပါ။ ကိုယ့်အချိန်နဲ့ ကိုယ့်အင်အားကို
ပိုပြီးအကျိုးများမယ့် နေရာမှာ သုံးပါ။ အသေးအမွှား ရပိုင်ခွင့်ကို
အချိန်ကုန်ခံပြီး မရမက ရအောင်လုပ်နေရင် ကိုယ့်စိတ်ထားပါ နိမ့်ကျသွားမယ်။
ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ ကိစ္စလေးတွေက တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ကိုအကြီးအကျယ်
ဒေါသဖြစ်သွားစေတာမျိုး ကြုံရတတ်တယ်။ နောက်မှစိတ်အေးသွားတဲ့အခါ
ဒီလောက် အသေးအဖွား ကိစ္စလေးလောက်နဲ့ ဣနြေ္ဒသိက္ခာမဲ့သွား လောက်အောင်
ဒေါသဖြစ်မိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အံ့သြမိတာ၊ ရှက်တာ ကြုံဘူးမှာပါ။
အဲ့ဒါမျိုး မဖြစ်အောင် သတိထားပါ။
တစ်ရာတန်လောက် ကိစ္စကြောင့်ဒေါသဖြစ်နေရင် တစ်သိန်းတန်လောက် ကိစ္စမှာလစ်ဟင်း သွားနိုင်တယ်။
မပေါင်းသင့်တဲ့သူနဲ့ မပေါင်းဖို့ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင် ကိုယ်ပါ ဒုက္ခရောက်သွား မယ်။
အရှင်းဆုံးဥပမာနဲ့ ပြောရရင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးတဲ့သူ ရောင်းတဲ့သူ၊အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းတဲ့ သူတွေနဲ့ မပေါင်းသင့်ဘူး။ တစ်ချို့က ငယ်သူချင်းဖြစ်လို့ ဆိုပြီး အကျင့်စာရိတ္တ မကောင်းပေမယ့် ပေါင်းတယ်။
သူ့ကိုကယ်ရင်း ကိုယ်ပါနစ်သွားတာ လည်းတွေ့ရတယ်။ နာမည်ပျက်ရှိတဲ့သူနဲ့ တွဲရင် ကိုယ်ပါ
နာမည်ပျက်မှာ သေချာတယ်။ မရိုးသားတဲ့ စီးပွားရေးမျိုး လုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့လည်း မပေါင်းသင့်ဘူး။
သိပ်ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ အခါမှာလည်း စိတ်မရှည်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပင်ပန်းလွန်းသွားတာမျိုး မဖြစ်အောင်စီစဉ်ပါ။ မလွဲသာ မရှောင်သာ ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ အခြေအနေကို ကြုံရရင် စကားများများမပြောပါနဲ့။
ကိုယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကိုလည်း ပြောစရာရှိတာကို နောက်မှအေးအေးဆေးဆေး
ပြောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မှာထားပြီး အနားယူပါ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ အလွန်အကျွံ အလိုမလိုက်ပါနဲ့။ အလိုလိုက်လွန်းရင် ကြာလေပိုပြီး
အလိုက်မသိလေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အလိုလိုက်တာများလေ ရတာနဲ့ မကျေနပ်လေ ဖြစ်တတ်တယ်။
ကြာရင်မတတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာရောက် အောင် တောင်းဆိုလာမယ်။ အဲ့ဒိအခါမှာ
စိတ်တိုမယ်။ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေဖြစ်မယ်၊ စိတ်ဆင်းရဲရမယ်။
သူတစ်ပါးရဲ့ရိုင်းဆိုင်းတဲ့အမူအရာ၊ အဆင့်အတန်းနိမ့်တဲ့ အမူအရာကြောင့်
ကိုယ်မှာဒေါသယမ်းအိုး မပေါက် အောင်သတိထားပါ။ (ယခုခေတ်မှာ
လူတော်တော်များများဟာ ကိုယ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကို အလေး မထားကြဘူး။
ယဉ်ကျေးတဲ့သူဖြစ်ရတာကို တန်းဖိုးထားတဲ့စိတ်၊ ဂုဏ်ယူတဲ့စိတ်မျိုးကို
မွေးပေးရမယ်။ လူငယ်တစ် ချို့ဟာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အမူအရာမျိုးကို လုပ်ပြတဲ့
ဗီဒီယိုတို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ အတုယူမှားကြတယ်။)
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အထင်လွဲနေလို့ စိတ်ဆင်းရဲရတာ တော်တော်များပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထင်လွဲစ ရာ မဖြစ်အောင် သတိထားသင့်တယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အထင်လွဲတာမျိုး မဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သ လောက်
ကြိူတင်စဉ်းစားပြီး ရှင်းထားပါ။ ပြောသင့်တာတွေကို ကြိုကြိုတင်တင်ပြောထားပါ။ သိလောက်ပါတယ် လို့တွေးပြီးမှ တစ်ဖက်က မသိလို့ မလုပ်တာမျိုး ကြုံရတဲ့အခါ သိရက်နဲ့ တမင် မလုပ်ပေးတာလို့တွေးပြီး
လူတစ်ယောက်နဲ့ လူတစ်ယောက် စရိုက်မတူဘူး။ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့ ဘ၀အတွေ့ အကြုံမတူဘူး။ ဒါကြောင့် အခြေ အနေတစ်ခုကို မြင်ပုံခံစားပုံ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပုံ မတူဘူး။ ကိုယ်မြင်သလို သူလည်းမြင်မယ်လို့ ပုံသေ
မတွေးပါနဲ့။ ငါ မြင်သလို မမြင်ရကောင်းလားဆိုပြီး စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး ရှင်းပြပါ။
အလုပ်တစ်ခုကို ခိုင်းတဲ့အခါမှာ တတ်နိုင်သလောက် လိုအပ်သမျှ အချက်အလက် တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးပါ။ ခဏခဏ ကိုယ့်ဆီကိုလာပြီး မေးမနေရအောင် ကြိုကြိုတင်တင် ပြောပြပေးထားပါ။
လူတော်တော်များများဟာ ဒေါသဖြစ်ရတာကို ကော်ဖီစွဲသလိုကို စွဲနေကြတယ်။
အထူးသဖြင့် ရာထူးကြီးတဲ့သူ တွေပိုပြီး ဒေါသကြီးတတ်တယ်။ ဒေါသကြီးရတာကို
ပါဝါတစ်မျိုးလို့ကို ခံစားရတယ်။ ပြောချင်သလို ပြောလိုက်ရတာမျိုးကို ပါဝါတစ်မျိုးလို ခံစားရတယ်။
ကိုယ်က ရာထူးကြီးကြီးလေလေ အောင်မြင်လေလေ ကိုယ့်ဆီက အကူအညီတောင်းမည့်သူတွေ
အခွင့်အရေး တောင်းမည့်သူတွေ များလာလေပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ အဲ့ဒိလူတွေကြောင့်
စိတ်အနှောက်အယှက် အများကြီး ဖြစ်ရ တတ်တယ်။
အထူးသဖြင့်လူတစ်ယောက်ကို မကျေမနပ်ဖြစ် နေရင် သူ့အကြောင်းကောင်းတာလေးတွေ
ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ဖက်ရှိပါတယ်။ ပြိုင်ဖက်တွေအပေါ်မှာ မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒေါသစိတ် ဖြစ်တတ်တယ်။ ပြိုင်ဖက်တွေက ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေ တယ်လို့ တွေးတတ်တယ်။ တစ်ကယ်လည်း ဒုက္ခပေးတတ် ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ အဆင်ပြေချင်ရင် ပြိုင်ဖက်တွေကြောင့် စိတ်တိုရတာ
ဒေါသဖြစ်ရတာ နဲချင်ရင် ပြိုင်ဖက်တွေ အပေါ်မှာ သဘောထားကြီးကြီးထားပါ။
ပြိုင်ဖက်ရှိတာ ကောင်းတယ်လို့ သဘောထားပါ။ ပြိုင်ဖက်တွေကိုလည်း ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အကူအညီပေးပါ။
အလုပ်လုပ်တာ ငွေရဖို့တစ်ခုတည်း အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ချမ်းသာဖို့၊ မိတ်ဆွေကောင်းများဖို့၊ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို အကျိုးပြုဖို့၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေကို သုံးရဖို့၊ ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတဲ့
ရည်ရွယ်ချက် လေးတွေလည်းပါမှ လေးနက်မယ်။ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်။ ကျေနပ်မှုရှိမယ်။
အသွားရှိရင် အပြန်ရှိတတ်တယ်လို့ သဘောထားရမယ်။ အဲ့သလိုသဘောထားတဲ့အခါ
ကိုယ့်ဘက်က အသွားရှိပေမယ့် သူ့ဖက်က အပြန်မရှိတဲ့အခါ ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်။
စိတ်ပျက်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တာ နည်းချင်ရင်၊ စိတ်ညစ်ရတာ၊ စိတ်ပျက်ရတာနည်းချင်ရင် အသွားရှိတိုင်း အပြန်မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတာကို
ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့အခါ ဘာမှပြန်မမျှော်လင့်ပဲ ကူညီလိုက်ပါ။ အခုပြောတဲ့အချက်တွေဟာ သိပြီးသားတွေပဲ များမယ်ထင်ပါတယ်။ သိပြီသားပေမယ့် မေ့နေတတ်လို့ သတိပေးတဲ့ အနေနဲ့ ပြောပြတာပါ။ ဆက်ပြီးတော့ စဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်ဒေါသကို ကိုယ်သိပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့သူ ၊ရင့်ကျက်တဲ့သူ၊
အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကို များများလုပ်နိုင်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရတဲ့သူတွေ
The artical by Sayataw U zawtika
Posted by yawcommunity at Thursday, August 07, 20080comments Links to this post
copy of ABC blog
Posted by yawcommunity at Tuesday, August 05, 20080comments Links to this post